चन्द्रमामा जग्गा किन्ने पहिलो नेपाली, ८० रोपनीको जग्‍गाधनी पुर्जा हातमा ! कति पर्यो मुल्य ? (भिडियो) – Etajakhabar
चन्द्रमामा जग्गा किन्ने पहिलो नेपाली, ८० रोपनीको जग्‍गाधनी पुर्जा हातमा ! कति पर्यो मुल्य ? (भिडियो)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ०६, २०७४ समय: २३:४६:३९